Creative Writing » ယောကျာ်းတွေ အသက်ရှည်ဖို့နဲ့ သစ္စာရှိဖို့. . .	16
Posted by Thint Aye Yeik on Jan 28, 2015 in Creative Writing, Critic, History, My Dear Diary | 16 comments
Kaung Kin Pyar says: နာပဲ ဖတ်တာမှားနေလား….၊ မှတ်မှတ်ရရသတိထားမိတာဆိုလို့…လက်လက်ဆင်တစ်ယောက် ခင်ဝင့်ဝါကို မရလို့…ဒေါ်ဖွားမေကို တစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာနဲ့…သူ ၁၆ နှစ်ကောင်မလေးနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်း ကြော်ငြာသွားတာတော့ သတိထားမိတယ်…။
အလင်းဆက် says: ကိုယ်ထင်ရင် ဒေါ်ဖွားမေတောင် ခင်ဝင့်ဝါလို့ ထင်… ပါဆို..
ဦးခင်ခ says: (အသက်ရှည်ဖို့…. မိန်းမတွေနဲ့ များများ ထိတွေ့ ပတ်သက်ကြပါစို့လို့…တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
အလင်းဆက် says: .ဟောဗျာ…
Novy says: ဇွတ်အောင်ရဲလင်းရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို သိရှိသွားပါပြီကွယ်
အလင်းဆက် says: ငမ်းးးးးးးးး ယောက္ခမ …တိတွားဘီ…..
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟီ ဟိ… ” ယောက်ျားတွေ အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင်…
အလင်းဆက် says: ကိုကိုဝီကတော့ အသက်တိုမှာ ကျိန်းသေသလောက်ပဲ..ဟီဟိ။
kai says: 109-Year-Old Woman Says Secret To Long Life Is Avoiding Men
The Huffington Post | By Ann Brenoff အသက်ကြီးနေတဲ့သူက.. အမှန်တွေချည်းပြောနေတာတော့မဟုတ်…။
အလင်းဆက် says: ကြည့်ရတာ အဲ့ဘွားတော်က..ယောကျာ်းတွေကို စိတ်နာနေပုံရတယ်..
aye.kk says: အလင်းဆက်ရေ..
အလင်းဆက် says: ဗဟုသုတ ကွန်မန့်အတွက် ..ကျေးဇူး အထူး….အန်တီ
uncle gyi says: ဘာပြောပြောအစွန်း၂ဖက်ကိုရှောင်မှဂျောက်ထဲမကျမှာပေါ့
အလင်းဆက် says: အဟုတ်
မြစပဲရိုး says: ဆက်ဆက် ရဲ့
အလင်းဆက် says: ကျနော့်လို သစ္စာ ရှိသော ယောကျာ်းများ.. မိုးရွာထဲ… ခေါင်းဆောင်း မပါပဲတော့…လမ်းမလျှောက်စေလို… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.